1. HGH ekwakheni umzimba, ukukhula kwemisipha
2. Ukubaluleka kokuqeqeshwa kwamandla okukhula kwemisipha
3. Kutheni ndiyisebenzisa, kwaye izihlunu azikhuli?
4. Umqeqeshi wobuqu kunye nokubaluleka kokulawula ngexesha le-HGH
5. Ukubaluleka kwesidlo seProtein High for the HGH сourse
6. Ukubaluleka kokulala kunye neenjuni zeHGH
7. Ininzi yeziqhamo kunye nemifuno ekudleni
8. Ukukhanyela okanye ukunciphisa utywala xa unyango lweHumm Growth Hormone
9. I-HGH - isheshayo sesiphumo sakho nge-200-300%
10. I-muscle ikhula njani neHGH?
11. Cardio intliziyo: ubuhle obungaphandle-impilo ngaphakathi
HGH ekwakheni umzimba, ukukhula kwemisipha
Amandla, ukunyamezela, ukuxhamla ngokuxhamlekileyo kwemisipha zeziphumo ezintathu eziphambili ukuba wonke umntu osebenza ngomzimba uzimisele ukufezekisa. Ngaphezu koko, ukungathinteki kwangaphandle kwezigaba kufakwe kwindawo yokuqala: kungekhona ngethuba lokuba le midlalo ithola igama lesibili "ukwakha umzimba," ngamanye amagama "inkokheli yomzimba".
Akubalulekanga kubaluleke kangakanani ukuba umqhubi uphumelele, into eyona nto iqhutywe ngayo izihlunu zakhe, nokuba ngaba inani lihambelana nemigangatho eyamkelekileyo. Kuba aba bakhi bomzimba bazimisele ukusebenza kanzima kwaye kunzima, kwintlungu.
Ukukhawulezisa iinjongo, abacebisi bemizimba abanamava bacebisa ukuba ukuthenga iGenotropin - isicatshulwa esekelwe kwi-hormone yokukhula kwabantu.
Ukubaluleka kokuqeqeshwa kwamandla okukhula kwemisipha
Ukususela kwiminyaka eyi-140 eyadlulayo, ukwakhiwa komzimba kuvakaliswe ngcamango yakhe eninzi kwaye ngexesha elifanayo uphuhliso olufanayo lwamaqela onke omzimba. Ngoko ke umsebenzi oyintloko ngamnye wokuzilolonga - isakhiwo semisipha yomzimba. Okugqwesileyo konke oku kunceda ekuqeqesheni amandla. Ezi zintlanu zabo zokwakha umzimba zibizwa ngokuthi yi-polyarticulaire eyisiseko.
Ezi ziquka izikwere, ukufa, ukushicilela ibhentshi, intonga yokudonsa kwi-belt kunye ne-bench press stand. Ngolunye lwale miba inenjongo yaso: ukusuka ekuphuhlisweni kwemisipha yemilenze ekuqiniseni izibilini. Ingxaki epheleleyo ijoliswe kwisiphumo sonke. Abaqeqeshi bezakhiwo baqeshisa i-4 inzuzo enkulu yokuqeqesha amandla:
- Ukukhula kobuthambo ngelixa i-fat fat. Ngethuba lo msebenzi, umzimba udla inani elikhulu lezondlo. I-stock and carbohydrate stock - glycogen. Ekupheleni komsebenzi, kuqaliswe iinkqubo zokuvuselela ezitshisa amafutha.
- Ukukhawuleza kwemetabolism. Ngenxa yoko, ukwanda kwondlo, eyona nto ibaluleke kakhulu ekwakheni ubunzima be-muscle: akuyi kubakho ukukhula ngaphandle kokungeniswa kweekhalori. Oku kuyinyaniso ngokusemgangathweni kubadlali abacebileyo abafumana ubunzima bunzima.
- Phinda ufunde onke amaqela amakhulu ama-muscle. Ngokutsho kophando lwezenzululwazi, phantsi kwalo mqathango ukuba umzimba uvelise i-testosterone kunye ne-hormone yokukhula, eyona nto ibangela ukuba ukwanda kwimizimba yesisipha.
- Ukusetyenziswa kweenkqubo zokuphefumula kunye neentsholongwane. Oku kwandisa kakhulu i-hormonal level, ekugqibeleni inegalelo elihle ekukhuleni kwemisipha.
Isiphetho sibonakala: uqeqesho lwamandla ludinga indlela enzulu, epheleleyo. Ukuba nje uguqula isifuba sakho okanye i-biceps, ngoko awuyi kukwazi ukufezekisa umphumo oyifunayo.
Kutheni ndiyisebenzisa, kwaye izihlunu azikhuli?
Lo mbuzo uvame ukucelwa ngabaqalayo. Njengomthetho, sithetha ngalabo bazama ukuzakhela ukwakha umzimba, ngaphandle kokukhokelwa ngumqeqeshi. Kukho izizathu ezininzi.
Okokuqala, umdlali we-novice, njengomthetho, uthatha umcimbi wenzondelelo, kodwa ngaphandle kolwazi olufanelekileyo.
Ngoko ke, ngokuqhelekileyo kubandakanya ukuzivocavoca okungadingekile kwiprogram yoqeqesho eyenza umthwalo owongezelelweyo. Kwaye kuba kungekho buchule bokuqokelela amandla okuqeqesha ixesha elide, into ephambili ayikho amandla okwaneleyo.
Okwesibini, abaqalayo bavame ukuphula umthetho woqeqesho lokuqina. Ngenxa yoko, ngaba umthwalo ongenelisekile uyadalwa, okanye iimisipha ezifuneka ukugxininiswa azenziwanga. Ukongezelela, ngokungaqhelekanga ekuzifundeni ngokwabo, ubani na owenza inani eliphindaphindiweyo lokuphindaphinda - kufuneka kube ngu-5-7 kubo. Eli nani linikeza ukukhula ngokuthe ngqo komzimba we-muscle.
Umqambi womzimba onokuqala, oye waqonda ukuphunyezwa ngokufanelekileyo kokusebenza okuyisiseko, ngaba ezinyangeni zokuqala ukwandisa ubunzima bomzimba ngo-5-7 kg.
Umqeqeshi wobuqu kunye nokubaluleka kokulawula ngexesha le-HGH
Ukuze ungazibuza ukuba kutheni ukuqeqeshwa kungabaniki iziphumo, kwaye kungabi nkunkuma yamandla, kunengqiqo ukubhekisela kwiinkonzo zomqeqeshi wakho. Masibuyele kumava adumile Jeffrey Life, okholelwa ukuba iimpumelelo zakhe ezakhiweni zomzimba zixhomekeke kubungcali kunye nokungaziphathi kakuhle komcebisi.
Cinga nje: kuyo yonke iseshoni, umzimba wakho kufuneka ufike kumda wamakhono okwenyama ukuze unqobe lo mkhuba ngokunyusa umthwalo. Kungenzeka ukuba ukuba wenza ukuzivocavoca ngokwakho, uyazisola kwaye unqabe ukusebenza "ngenxa yokuba andinako". Ukuba ukholwa iifomanani, kwenzeka njalo: malunga ne-60% yabatlali abaqalayo benza inkqubo yoqeqesho kuphela isiqingatha. Kodwa umcebisi akayi kuvumela ukuphumula - ngenxa yesiphumo sakho.
Ngokuqinisekileyo, umqeqeshi wakho ngokwakhe akayena umtyholi ofuna ukukuhlambalaza. Ngokuphambene noko. Akayi kuvumela ukuba umdlali angagqithisekanga umzimba, kodwa uya kugxininisa ekulungiseni iindawo ezibuthathaka. Umcebisi omhle uya kuphuhlisa inkqubo kunye nokutya. Kodwa into ephambili ayikho nakule nto, kodwa ngokusemandleni komqeqeshi ukuchonga ukuba zeziphi iindlela zokuzilolonga kunye nezindlela zoqeqesho ziya kusebenza ngempumelelo kuwe.
Ukubaluleka kokutya kwiprotheni ephezulu kwikhosi yeHGH
Ngexesha lokusebenza ngamandla, xa izitolo ze-glycogen ziyancitshiswa, umzimba uqala ukuzalisa amandla ngenxa yeprotheni, eyona isistim seesisundu. Ngako oko, inani labo kwiiseli kufuneka libuyiselwe rhoqo.
Ukwenza oku, kufuneka ulandele ukutya okukhethekileyo kunye nomxholo weprotheni ephezulu: umakhi womzimba uyadinga i-2-3 amagremu ngosuku ngemililo nganye yesisindo somzimba.
Oko kukuthi, ngesisindo se-100 kg, umdlali kufuneka athole i-200-300 yeprotheni imihla ngemihla. Kuphi ukufumana?
Umthombo wokuqala kukutya kwakho okuqhelekileyo. Qinisekisa ukufaka kuyo:
- amaqanda abamhlophe
- yenkomo nenkomo
- inkukhu kunye ne-turkey inyama
- isonka samasi se-Cottage
Umbuzo wenzakaliso kunye neenzuzo ze-yolk yeqanda ihlala ingqubuzana. Abagijimi abaninzi bayayixabisa njengomthombo wamafutha abalulekileyo namavithamini. Ngakolunye uhlangothi, i-fatty acids iyancipha ukuveliswa kwe-hormone yokukhula, ngokunciphisa ukuphumelela kwesakhiwo somzimba.
Ezinye iingcali zithi i-protein ekudleni kokutya okuqhelekileyo yanele ukuyibuyisela kwiisisipha zomzimba. Nangona kunjalo, kwimithwalo ephezulu kunconywa ukuba ungeze ukondla kwezemidlalo, equkethe iiprotheyini ezivela kwi whey. Inzuzo eyona nto ihamba ngokukhawuleza ngokukhawuleza: ukuphela kwemizuzu embalwa, ngelixa inyama igalelwe ixesha elingaphezulu kweyure.
Ngokwahlukileyo, kufuneka kuthiwe ngesidingo sokwandisa umxholo wekhalori wokutya. Abakhi bomzimba bafuna ukufikelela kwi-3000 kcal ngosuku, ngoko kuphela ukukhula kwemisipha kuya kusebenza.
Ukubaluleka kokulala kunye neenjuni zeHGH
Kanye kunye nokusebenza rhoqo kunye nesondlo esifanelekileyo, isiseko senqubekela phambili ekwakheni umzimba siyifumana ngokupheleleyo. Nayi indima ephambili idlalwe ngobuthongo bokulala, okufuneka kunikezwe ubuncinane iiyure ze-8. Ngenxa yokwanda komthwalo, ixesha lokuphumla linyuswa kwiiyure ze-9-11.
Kutheni oku kubaluleke kangaka?
Inyaniso kukuba, ngexesha lokulala, ukuveliswa kwehomoni kuyasebenza, kubandakanywa neHGH. Kwiiyure zokuqala ze-2 emva kokulala, inqanaba lomzimba landa ngokukhawuleza, ngokukhawuleza inkqubo yokudibanisa i-acids fat and stimulates processes of anabolic. Ngokufanelekileyo, kufuneka ukhululeke ngemini - malunga neeyure ze-1-2.
Ukuba ngesizathu esithile ubusuku obudlulileyo bungekho ubuthongo, kungcono ukuhlehlisa uqeqesho. Akunakwenzeka ukuba uya kuba kude kummandla wokukhathala, kodwa unokulimaza inkqubo yesifo.
Ininzi yeziqhamo kunye nemifuno ekudleni
Nangona ukuba iziqhamo zinomdla oqinileyo njengomthombo wamavithamini, abaninzi abanomzimba bakhetha ukungawasebenzisi. "Ukwesabisa" into - umxholo we-fructose, oguqulwa waba ngamafutha.
Nangona kunjalo, ungalibali ukuba i-glycogen kwisibindi ichithelwa rhoqo kwaye idinga ukuzaliswa kwakhona. Ukongeza, i-fructose iya kunika i-glycogen ne-muscle, ekuthintela ukukhathala kwabo ngokukhawuleza ekuqeqesheni.
Ngoko ke, imenyu yosuku kufuneka yenze:
Isethi esinjalo siya kunceda iinkqubo zokuvuselela umzimba kunye nokuzicebisa ngezinto ezixabisekileyo.
Ngokuphathelele imifuno, ngokuqinisekileyo abo bahlaseli bazuza. Abaqulunqwa ngamagqabantshintshi banconywa ngokukhethekileyo i-artichoke, i-pepper e-sweet, isipinashi kunye neentlobo zeklabishi:
I-Brussels ihluma, i-broccoli ne-kale. Ezi mveliso zikhethiweyo kungekhona kuphela ngenxa yokutya okuphezulu kwamavithamini, i-fibre, i-calcium, i-manganese, ithusi. Ekubunjweni kwabo kuyafumaneka kwaye i-polyunsaturated fatty acids i-omega-3 kunye ne-omega-6, eyanceda ukunciphisa amazinga e-cholesterol kunye nokunciphisa ingozi yezifo zentliziyo.
Iimidlalo zondlo-zondlo zicebisa ukutya ubuncinane ii-3 zokutya kwezidlo zemifuno imihla ngemihla kunye ne-2 izitya ze-90 nganye.
Ukukhanyela okanye ukunciphisa utywala xa unyango lweHumm Growth Hormone
Umphumo owonakalisa utywala emzimbeni uyaziwa kakuhle, kodwa kulo mzekelo kubalulekile ukuxelela ukuba ingozi yiselo yotywala yimizimba yomzimba. I-Ethanol equlethwe kwiziphuzo ezinxilisayo iyanciphisa iprotein yeprotein nge-25%.
Oku kuthetha ukuba ukusela isahlulo kuya kunciphisa ukuphumelela kwesakhiwo somzimba osebenza ngaso nzima.
Ukongezelela, utywala uyanciphisa umgangatho we testosterone nge-24% - i-steroid ejongene nokukhula kwemisipha. Ngoko umonakalo uphindwe kabini.
Kwixesha elizayo, ukuhlawulela rhoqo - ukuwa kwezinto ezibonakalisiweyo zamandla. Ngoko ke, ukuba ulungele ukuqhubela phambili, kungcono ukunqaba utywala.
I-HGH - isheshayo sesiphumo sakho nge-200-300%
Kwiminyaka emininzi, i-HGH isele isistim se-anabolic esithandwa kakhulu phakathi kwabakhi bomzimba emhlabeni wonke. Ngokuqhelekileyo ivuselela iprotein yeprotein kunye negalelo ekwakheni imisipha. Ukuba uzama ukufezekisa "inkcubeko yomzimba" ngokukhawuleza kunokwenzeka, isisombululo esifanelekileyo ukuthenga iHGH kwaye uthabathe ngokwemilinganiselo ephakanyisiweyo.
Imfuno yeso sidakamizwa ngenxa yezibonelelo zayo ezicacileyo:
- ngokungafani ne-anabolic steroids, akusiyo i-hypertrophy ye-fibric muscle ekhoyo ekhuthaza, kodwa ukwanda kwenani labo
- kunye nesakhiwo sobuninzi besistim kunceda ukunciphisa inani lamathambo angaphantsi;
- ikhusela i-cartilage yama-menisci, ii-disvertebral disc, kwakunye neigaments ezivela kwi-microtraumas
- ukwandisa ukugcinwa kwamandla omzimba wonke
Ukongezelela, ukwenzakala kwamathambo, amaqabane kunye nezihlunu, unyango lwe-hormone yokukhula lusebenza kakuhle: umveliso ubuyisela iiseli kwaye uqinisekisa ukuphulukiswa ngokukhawuleza
Kubalulekile ukukhumbuza: I-hormone yokukhula yabantu ayiyilanga elingummangaliso apho izihlunu ziya kukhula ngaphandle kwemizamo yakho. Oku kungumncedisi, ukuvumela ukuba ukhawuleze ukuphumeza kwesiphumo ngamaxesha e-2-3.
Ngokuqinisekileyo, konke oku kusebenza kuphela kwisiyobisi sokuqala, kwaye kungabikho kwabanxulumene nabo. Ndifuana u bathenge ngokusemthethweni izinga lokukhula kwehommoni yabantu - qha ga mshelana nomsasazisi osemthethweni womenzi.
HGH Thailand uhambisa loo mveliso kuwo onke amazwe ehlabathi. I-HGH ethengiswa nge-intanethi ngendlela efanayo inayo yonke ilayisenisi kunye neziqinisekiso, kunye nokuthengiswa ngqo kwi-Bangkok. Ukuziswa kuyo nayiphi na ihlabathi kuthatha ixesha elide leentsuku ze-7.
I-muscle ikhula njani neHGH?
Le nkqubo idinga iimeko ze-2 - amandla kunye nombane. Eyokuqala kufuneka unikele rhoqo ngokutya kwiprotheni, okwesibini yenziwe ngokuqeqesha okufanelekileyo. Ngethuba lokusebenzisa amandla amandla kunye nomthwalo ophezulu kwimisipha ye-muscle-break breaks-breaks occur. Abamkeli beeseli ezichaphazelekayo banikeza iimpawu zokufunyanwa kwakhona.
Ukuqulunqwa kweprotheni kuqalwa, iimolyuli eziqala ukufakwa kwiindawo eziwonakalisiweyo. Yile ndlela i-muscle ekhula ngayo, ukwandisa umthamo wayo kunye nobunzima. Kungenxa yoko ukufezekisa umphumo ofunwayo, abasebenzi bezakhono zinconywa batusa ukuba baqhelisele umda wamandla.
Cardio intliziyo: ubuhle obungaphandle-impilo ngaphakathi
Akukho myili womzimba ozihlonelayo kuphela oza kupheleliswa ukuqeqeshwa ngamandla, nje ukuba abe yintaba yemisipha. Ukwakhiwa kwezakhiwo ngumdlalo wabantu abanobuchopho, ngoko ke ukuzivocavoca ukwandisa ubunzima be-muscle kufuneka zongezwe ngokugijima, ngebhayisikili, ukubhukuda kunye nezinye izivivinyo ze-aerobic.
Baya kunceda ukuqinisa intliziyo yesimo kunye nokuphefumula, ukunyusa umgangatho wokugqibela kwaye ekugqibeleni uye negalelo ekudalweni komzimba ogqibeleleyo.